အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာ၏ဖခင်ကြီး Charles Allen Prosser
Charles Allen Prosser ကို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာ၏ဖခင်ကြီးအဖြစ် လူသိများသည်။ သူ့ကို 1871 ခုနှစ်တွင် New Albany တွင်မွေးဖွားခဲ့ပြီး ၎င်း၏ မူလတန်းနှင့် အထက်တန်းပညာရေးကို ရရှိခဲ့သည်။ Prosser သည် B.A ကိုလက်ခံခဲ့သည်။ နှင့် 1897 နှင့် 1906 ခုနှစ်တွင် DePauw တက္ကသိုလ်မှ M.A. ဘွဲ့များအသီးသီးရရှိခဲ့သည်။ သူ့ L.L.B. University of Louisville မှ ဘွဲ့ဒီဂရီများနှင့် သူ၏ Ph.D. Columbia University မှ Prosser သည် တက္ကသိုလ်များစွာမှ ဂုဏ်ထူး ဆောင်ဘွဲ့များစွာကို ရရှိခဲ့ပါသည်။ Charles Allen Prosser သည် Bank and Spring Streets တွင်ရှိသော New Albany အထက်တန်းကျောင်းဟောင်းတွင် သမိုင်းနှင့် ရူပဗေဒဘာသာရပ်ကိုလည်း သင်ကြားပေးခဲ့သည်။ ၁၉၀၀ မှ ၁၉၀၈ ခုနှစ်အတွင်း ဒေသခံကျောင်းအုပ်ကြီးအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ဤကာလအတွင်း သင်ကြားရေးစနစ်ဟောင်းကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲကာ ဆရာအတတ်ပညာများကို အဆင့်မြှင့်တင်ကာ E. 6th နှင့် Spring Streets တို့တွင် တည်ရှိသော အထက်တန်းကျောင်းသစ်ကို ဆောက်လုပ်ခဲ့ပြီး မြို့တော်၏ လက်ရှိစာကြည့်တိုက်ကို ရရှိရန် ကူညီပေးခဲ့သည်။ ရပ်ရွာ၏ ပထမဆုံး Night School Program ကို စတင်ခဲ့သည်။ ကြီးကြပ်ရေးမှူးလုပ်စဉ်တွင်၊ အရောင်းအ၀ယ်လုပ်ရန် လက်ဖြင့်လုပ်ဆောင်နေသော ယောက်ျားလေးများစွာကို သူတွေ့ဆုံခဲ့ပြီး အရောင်းအ၀ယ်သမားများကို လေ့ကျင့်ပေးသည့်ကျောင်းများသည် ကူညီပေးသင့်သည်ဟု သူစတင်ခံစားခဲ့ရသည်။ Mr. Prosser သည် သူ၏ Ph.D တွင် အလုပ်လုပ်ရန် ခွင့်ပန်ခဲ့သည်။
နယူးအယ်လ်ဘာနီတွင် ကြီးကြပ်ရေးမှူးထံ မပြန်ခဲ့ပါ။ Dr. Prosser ၏အောင်မြင်သောအလုပ်အကိုင်တွင် ညနေပိုင်းစက်မှုသင်တန်းများပေးသည့်နယူးယောက်စီးတီးရှိ Children's Aid Society ၏ကြီးကြပ်ရေးမှူး ပါဝင်သည်။ မက်ဆာချူးဆက်အတွက် စက်မှုပညာရေး လက်ထောက်ကော်မရှင်နာ၊ နယူးယောက်စီးတီး စက်မှု ပညာရေးမြှင့်တင်ရေး အမျိုးသားအဖွဲ့အစည်း အတွင်းရေးမှူး။ အမျိုးသားလူ့ဘောင်အဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူး အဖြစ် ဆောင်ရွက်စဉ်တွင် တစ်ဦးချင်းနှင့် အဖွဲ့များကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဖွဲ့စည်းကာ စိတ်အားထက်သန်စွာ ခရီးထွက်ကာ အစီအစဉ်များနှင့် စံနှုန်းများကို အကြံပြုကာ နိုင်ငံတော်နှင့် ပြည်နယ်နှင့် ပြည်ထောင်စု ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပညာရေးကို နိုးကြားလာစေရန် ဥပဒေများကို မျှဝေပေးနိုင်ရန် ကူညီပေးခဲ့ပါသည်။ သူသည် Minneapolis ရှိ ရှေ့ဆောင် Dunwoody စက်မှုအင်စတီကျုကို ၃၁ နှစ်ကြာ ဦးဆောင်ခဲ့ပြီး ယနေ့ခေတ် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ လေ့ကျင့်မှု သဘောတရားများစွာကို ပုံဖော်ထားသည်။ သက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာရေးအတွက် ဖက်ဒရယ်အကူအညီကို ဖန်တီးပေးသည့် Smith-Hughes အက်ဥပဒေ၏ အရေးအသားနှင့် ကျမ်းပိုဒ်များတွင် အရေးပါသူဖြစ်သည်။ စာရေးဆရာ တစ်ဦး အနေဖြင့် ဒေါက်တာ ပရော့ဆာသည် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာဆိုင်ရာ ပြဌာန်းစာအုပ်များစွာကို တရားဝင် တည်းဖြတ်ခွင့်ပြုခဲ့ပြီး အများစုမှာ ယနေ့ခေတ် တက္ကသိုလ်များတွင် အသုံးပြုဆဲဖြစ်သည်။ သူသည် စာစောင်များနှင့် မဂ္ဂဇင်းဆောင်းပါးများအတွက် ထင်ရှားကျော်ကြားသော စာရေးဆရာများနှင့် မကြာခဏ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာ သင်တန်းများတက်ရန် ပညာရေးနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းတွင် ရာနှင့်ချီသော အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတို့ကို လှုံ့ဆော်အားပေးခဲ့သည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတစ်ဝှမ်းလုံးရှိ သက်မွေး ဝမ်းကျောင်း ပညာနှင့် စက်မှုပညာရှိ ရှေးယခင်နှင့် ပစ္စုပ္ပန်ခေါင်းဆောင် အများအပြားသည် Prosser နှင့် ၎င်းတို့၏ တက်ကြွသောချဉ်းကပ်မှုနှင့် လက်တွေ့ကျသော အတွေးအခေါ်တို့မှ ဤအရေးကြီးသော အလုပ်အတွက် ၎င်းတို့၏ လှုံ့ဆော်မှုမှ ဆင်းသက်လာကြပေသည်။
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းသင်တန်းသည် တစ်ဦးချင်းအတွက်သာမက နိုင်ငံအတွက်ပါ အကျိုးကျေးဇူးများစွာ ရှိပါသည်။ ထို့အပြင် သက်မွေးဝမ်းကျောင်း သင်တန်း၏ အကျိုးကျေးဇူးအချို့မှာ-
အလုပ်အဆင်သင့်ဖြစ်ခြင်း - ဤသင်တန်းသည် လူတစ်ဦးအား အလုပ်အကိုင်အဆင်သင့်ဖြစ်စေပြီး ကျောင်းသားများသည် ၎င်းတို့၏လေ့လာမှုပြီးဆုံးပြီးနောက် အလုပ်တစ်ခုကို တိုက်ရိုက်ရနိုင်သည်။ ထို့အပြင်၊ ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်နာများ၊ ဟိုတယ်ဆိုင်ရာ၀◌န်ဆောင်မှုများ၊ ပရိဘောဂ အတတ်ပညာရှင်များ၊ လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူများ၊ ကွန်ပျူတာ ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်မှု၊ အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်းနှင့် အခြားအလုပ်များစွာအတွက် လိုအပ်သော ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် သင်တန်းများကို ကျောင်းသားများကို ထောက်ပံ့ပေးသည်။ ထို့အပြင် ၎င်းသည် လူကို ကျွမ်းကျင်ပြီး သက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်အလိုက် အလုပ်အတွက် အဆင်သင့်ဖြစ်စေသည်။
နိမ့်သောပညာရေးကုန်ကျစရိတ် - ဤသင်တန်းများ၏ အခကြေးငွေများသည် အတော်လေးစီးပွားရေးဖြစ်ပြီး မည်သူမဆိုသူတို့အတွက် အလွယ်တကူငွေပေးချေနိုင်သည်။ ထို့အပြင် ၎င်းတို့သည် ၃ နှစ် ဒီဂရီသင်တန်းကိုမရွေးချယ်ချင်သောကျောင်းသားများအတွက် လွယ်ကူသော ရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည့်အပြင် ရက်တိုသင်တန်းများလည်း များစွာ ပေါ်ပေါက်နေပြီ ဖြစ်ပါသည်။ ဤသက်မွေးဝမ်းကျောင်း သင်တန်းအများစုသည် ဘွဲ့သင်တန်းများကဲ့သို့ ကောင်းမွန်ပြီး အလုပ်အကိုင် အမြန်ရလွယ်ပါသည်။ ထို့အပြင် ဘွဲ့သင်တန်းစရိတ် မတတ်နိုင်သော ကျောင်းသားများအတွက် ၎င်းတို့သည် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းတိုးတက်ခြင်း – ၎င်းတို့သည် အလုပ်တစ်ခုရှိ၍ ကျွမ်းကျင်မှု အသစ်များ ရယူလိုသူများအတွက် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် အဆိုပါသင်တန်းများ၏ ကြာမြင့်ချိန်သည် ဘွဲ့သင်တန်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အလွန်နည်းသော်လည်း သင်ကြားသည့် ကျွမ်းကျင်မှု အစုံသည် အလွန်အသုံးဝင်ပြီး အရေးကြီးပါသည်။ ထို့အပြင်၊ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တစ်ဦးသည် ၎င်းတို့၏ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ အလားအလာကို မြှင့်တင်ရန် အလွန်ထိရောက်သည်။ ထို့အပြင် ကျောင်းထွက်သူများနှင့် ပညာရေးဆိုင်ရာ လေ့လာမှုများကို စိတ်ပါဝင်စားမှုနည်းသော ကျောင်းသားများသည် ၎င်းတို့၏ စိတ်ပါဝင်စားမှုနယ်ပယ်တွင် ကွဲပြားသောသင်တန်းများကို ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု – ကဏ္ဍအသီးသီးရှိ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ၏ လိုအပ်ချက်သည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် တစ်နေ့တစ်ခြား တိုးပွားလာနေသည်။ ထို့အပြင် ကျွမ်းကျင်သော လူအင်အား တည်ရှိမှုသည် လူ့အဖွဲ့အစည်း အတွက်သာမက ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများ၏ စီးပွားရေးကိုလည်း အကျိုးပြုပါသည်။ ထို့ကြောင့် အခြားနိုင်ငံမှ လူအင်အား တင်သွင်းရန် လိုအပ်မှုမှာလည်း လျော့နည်းလာသည်။ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာ လိုအပ်ချက် ကြီးထွားလာပါသည်။
နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ကျွမ်းကျင်သော လုပ်သားအင်အား လိုအပ်ပြီး အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပညာသည် အလုပ်အကိုင်အတွက် ပြင်ဆင်ပေးသည်။ ထို့အပြင် ကျွမ်းကျင်လုပ်သား လိုအပ်ချက်သည် စီးပွားရေးနှင့် အစိုးရ ကဏ္ဍနှစ်ခုစလုံးတွင် အမြောက်အမြား တိုးမြင့်လာခဲ့ပေသည်။ ထို့အပြင် အသက်မွေးဝမ်း ကျောင်းပညာသည် တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် များပြားလှပါသည်။ ထို့အပြင်၊ ကျောင်းသားများသည် ၎င်းတို့၏ ပင်ကိုယ်စွမ်းရည်နှင့် စွမ်းရည်များကို မြှင့်တင်ရန် လေ့ကျင့်သင်ကြားရန် အခွင့်အလမ်းများ ရရှိလာ သောကြောင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ သင်တန်းများသည် အံ့အားသင့်စရာ ပက်ကေ့ခ်ျတစ်ခုအဖြစ် ရောက်ရှိလာပါသည်။ ထို့အပြင် ၎င်းတို့သည် ၎င်းတို့၏နယ်ပယ်တွင် အလွန် အောင်မြင်ပြီး ကောင်းမွန်သော ပက်ကေ့ဂျ်များကို ရယူကြသည်။ နိဂုံးချုပ်အနေနဲ့ ဒီသင်တန်းတွေကို ပြီးမြောက်တဲ့ ကျောင်းသားတွေဟာ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ပညာရပ်တစ်ခုသာ ရရှိသူတွေထက် အလုပ်မှာ ပိုကောင်းလာပါတယ်။ ဒါ့ပြင် ဒါဟာ နိုင်ငံ့စီးပွားရေးကို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် အထောက်အကူ ပြုတဲ့ အရာတစ်ခုလည်း ဖြစ်လာပေသည်။ ထို့အပြင် အစိုးရနှင့် စီးပွားရေး ကဏ္ဍနှစ်ခုလုံးတွင် အဆိုပါ ကျွမ်းကျင် ပညာရှင်များအတွက် လိုအပ်ချက် မြင့်မားနေပါသည်။ ဒါတွေအားလုံးက ကျောင်းသားတွေ၊ လူ့အဖွဲ့အစည်း၊ နိုင်ငံနဲ့ အလုပ်ရှင်တွေကို အကျိုးပြုလာခြင်းပင် ဖြစ်ပေတော့သည်။
အမေး။ ။အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာသည် မိရိုးဖလာပညာရေးနှင့် မည်သို့ကွာခြားသနည်း။
အဖြေ။ ။ မိရိုးဖလာပညာရေးတွင် သီအိုရီဆိုင်ရာ ပစ္စည်းများ သင်ကြားရေးနှင့် သင်ကြားရေးအပေါ် အဓိက အလေးပေးပါသည်။ သို့သော် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာသည် သင်ယူမှုနှင့် လက်တွေ့အသိပညာများကို သင်ကြားခြင်းအပေါ် အလေးပေးသည်။ ထို့အပြင် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာသည် လူကို အလုပ်အကိုင် အဆင်သင့်ဖြစ်စေသည်။
အမေး။ ။အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာ၏ ဖခင်ကား မည်သူနည်း။
အဖြေ။ ။ Charles Allen Prosser သည် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာ၏ ဖခင်အဖြစ် လူသိများသည်။ သူ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ နောက်ပိုင်းတွင် ကမ္ဘာကြီးကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲသည့် နိုင်ငံ၏ ပညာရေးစနစ် မြှင့်တင်ရန် ဖြစ်သည်။
Labels: Business, Education, Job, စီးပွားရေး, ပညာေရး
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာ သို့မဟုတ် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေး (VET) သည် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပညာနှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ ပညာရေး (CTE) ဟုခေါ်သော သင်ယူသူများကို လက်စွဲ သို့မဟုတ် လက်တွေ့လုပ်ဆောင်မှုများတွင် အခြေခံထားသည့် အလုပ်အကိုင်များအတွက် သင်ယူသူများကို အစဉ်အလာအရ ပညာရပ်မဟုတ်သည့်အပြင် သီးခြားကုန်သွယ်မှု၊ အလုပ်အကိုင် သို့မဟုတ် အသက်မွေးဝမ်း ကြောင်းနှင့် လုံးဝသက်ဆိုင်သည့်၊ ထို့ကြောင့် သင်ယူသူပါဝင်သည့် ဝေါဟာရဖြစ်သည်။ သင်ယူသူသည် နည်းစနစ် သို့မဟုတ် နည်းပညာအုပ်စုတစ်ခုတွင် ကျွမ်းကျင်မှုကို တိုက်ရိုက်တိုးတက်စေသောကြောင့် တစ်ခါတစ်ရံတွင် ၎င်းအား နည်းပညာဆိုင်ရာပညာရေးဟု ခေါ်ဆိုပါသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် အသက်မွေးဝမ်း ကြောင်းနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကို အပြန်အလှန်သုံးကြသည်။ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာကို သင်ကြားရေးဆိုင်ရာ အသိပညာအဖြစ် ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်သည်။ သီအိုရီနှင့် စိတ္တဇအယူအဆဆိုင်ရာ အသိပညာ၊ အထက်တန်းပညာရေး၏ ဝိသေသကို အာရုံစိုက်နိုင်သည့် အများအားဖြင့် ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော သိပ္ပံပညာနယ်ပယ်တွင် ပညာရေးတွင် အသုံးပြုသည့် ကြေငြာအသိပညာနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နိုင်သည်။
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာသည် အလယ်တန်း သို့မဟုတ် အလယ်တန်းအဆင့်တွင် ဖြစ်နိုင်ပြီး အလုပ်သင်စနစ်နှင့် အပြန်အလှန် အကျိုးပြုနိုင်သည်။ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာကို ကြိုတင်သင်ယူမှုနှင့် အထက်တန်းပညာရေးအတွက် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပညာရေးဆိုင်ရာ ခရက်ဒစ် (ဥပမာ တက္ကသိုလ်တစ်ခုတွင်) ခရက်ဒစ်အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုမှုဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာကို အသိအမှတ်ပြုနိုင်သည်၊ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ အဆင့်မြင့်ပညာရေး၏ ရိုးရာအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်အောက်တွင် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ပုံစံဖြင့် ထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲပါသည်။ နှစ်ဆယ်ရာစုအကုန်အထိ၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာသည် ဥပမာ၊ မော်တော်ဆိုင်ကယ် စက်ပြင်ဆရာ သို့မဟုတ် ဂဟေဆော်ခြင်းကဲ့သို့သော သီးသန့်အရောင်းအ၀ယ်များကို အာရုံစိုက်ခဲ့ပြီး ထို့ကြောင့် အောက်ခြေလူမှုရေးလူတန်းစားများ၏ လှုပ်ရှားမှုများနှင့် ဆက်စပ်နေပါသည်။
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာသည် အသက်အရွယ်ကြီးရင့်သော အလုပ်သင်ပညာရေးစနစ်နှင့် ဆက်စပ်နေ သည်။ သို့သော်လည်း လုပ်သားဈေးကွက်သည် ပိုမိုထူးခြားလာပြီး စီးပွားရေးများသည် ကျွမ်းကျင်မှု အဆင့်များ မြင့်မားလာခြင်းကြောင့် အစိုးရများနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည် အများသူငှာ ထောက်ပံ့ထား သော သင်တန်းကျောင်းများနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် ထောက်ပံ့ထားသော အလုပ်သင် သို့မဟုတ် လေ့ကျင့်ရေး အစပျိုးမှုများမှတစ်ဆင့် အနာဂတ်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပညာရေးအတွက် ပိုမိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံ လာကြသည်။ အလယ်တန်းလွန်အဆင့်တွင် သက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာကို ပုံမှန်အားဖြင့် နည်းပညာ တက္ကသိုလ် တစ်ခု သို့မဟုတ် ဒေသဆိုင်ရာအသိုင်းအဝိုင်းကောလိပ်မှ ပံ့ပိုးပေးသည်။
Labels: Education, ပညာေရး
ထိပ်တန်းမန်နေဂျာများအသုံးပြုသည့် အကျပ်အတည်းစီမံခန့်ခွဲမှုဗျူဟာ 8 ခု
၁။ ရှင်းလင်းသော ရည်မှန်းချက်များ သတ်မှတ်ခြင်း။
ထိပ်တန်းမန်နေဂျာများသည် အကျပ်အတည်းနှင့်ပတ်သက်သည့် ရှင်းလင်းပြတ်သားသော အသေးစိတ် ရည်မှန်းချက်များကို ချမှတ်ကြသည်။ ထိုသို့လုပ်ဆောင်ရန်၊ ၎င်းတို့သည် အကျပ်အတည်းကြောင့် ထိခိုက်နိုင် သည့် ပါတီများ၊ လူများ၊ ဖောက်သည်များ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ အလုပ်ရှင်များနှင့် သက်ဆိုင်သူများ၏ အသေးစိတ် အချက်အလက်အားလုံးကို စုဆောင်းပါသည်။ အဲဒီနောက်မှာတော့ ပါတီတစ်ခုချင်းစီအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိနိုင်တဲ့ ဆုံးရှုံးမှုတွေအတွက် ဖုံးကွယ်ဖို့ အစီအစဉ်တွေ ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ သက်ရောက်မှုရှိသော ပါတီများသည် အမြဲတစေ ဆက်စပ်နေပါသည်။ လက်တွေ့ကျသော ရည်မှန်းချက်များအားလုံးကို စိတ်ထဲတွင်ထားပြီး၊ ထိပ်တန်းမန်နေဂျာများသည် အသေးစိတ်ရေးသားထားသော ပုံစံအစီအစဉ်တစ်ခုကို ချမှတ်ပြီးနောက် ၎င်းအား ဥပဒေကြောင်းအရ အရေးယူမှုများနှင့် သက်ဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများဖြင့် အရန်သိမ်းဆည်းပါ။ လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တစ်ခုစီနှင့် ပတ်သက်သည့် လုပ်ဆောင်မှုအားလုံးကို ဤအစီအစဥ်တွင် တိကျစွာဖော်ပြထားပါသည်။ ထို့နောက် ကုမ္ပဏီအတွင်းရှိ ချိတ်ဆက်သူနှင့် သက်ဆိုင်သူတိုင်းကို အစီအစဉ်ကို ထုတ်ပြန်ပါသည်။ လုပ်ငန်းရည်မှန်းချက်များအတိုင်း ရည်မှန်းချက်ကို ချိန်ညှိပြီး မွမ်းမံထားသည်။ အကျပ်အတည်းစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဥ်ကို ရေးသားသည့်အခါ ဥပဒေရေးရာနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူများ၏ တည်ရှိမှုနှင့် ၎င်းတို့၏ အခန်းကဏ္ဍသည် အမြဲတမ်းပါဝင်သည်။ အထူးသဖြင့် ကုမ္ပဏီတစ်ခုသည် အမြဲတမ်းချောမွေ့စွာ စီးဆင်းနေသောအခါတွင် အကျပ်အတည်းကို ခန့်မှန်းရန် မလွယ်ကူပါ။ ၎င်းသည် အကျပ်အတည်းကာလတွင် အမျိုးမျိုးသောအကျိုးဆက်များရှိသည့် ကုမ္ပဏီများကို ဗျူဟာများမချမှတ်ရန် ဆွဲဆောင်လေ့ရှိသည်။ ထို့ကြောင့်၊ ထိပ်တန်းမန်နေဂျာများသည် ၎င်းတို့၏ ကုမ္ပဏီရှိ ပြဿနာမှန်သမျှကို စီမံခန့်ခွဲရန် ၎င်းတို့၏ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များကို တသမတ်တည်း ချမှတ်ပြီး ချိန်ညှိပါ။ ရည်မှန်းချက်များသည် မန်နေဂျာများအား ၎င်းတို့လုပ်ဆောင်ရမည့် လုပ်ငန်းတာဝန်များ၊ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် ၎င်းတို့လုပ်ဆောင်ရမည့် သတင်းအချက်အလက်များကို အစီအစဉ်ဆွဲကာ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ဖွယ်ရှိသော ခြိမ်းခြောက်မှုများကို ဖော်ထုတ်ရန် ကူညီပေးပါသည်။ စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းသည် ကောင်းမွန်သော ဘဏ္ဍာရေး ရလဒ်များ အပါအဝင် ပိုမိုကောင်းမွန်သောရလဒ်များကို ဖြစ်ထွန်းစေပါသည်။
Labels: Business, Job, Motivation, Success, Tips
သင့်ကလေးကို ၀ နှစ်မှ ၅ နှစ်အထိ ကြီးထွားစေရန်
သင့်ကလေး၏ ဦးနှောက်သည် ၎င်းတို့မွေးဖွားချိန်မှစပြီး ကြီးထွားလာပုံသည် ၎င်းတို့၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ စတင်သိရှိနားလည်သိရှိလာသောအခါ ရရှိလာသော အချက်ပြမှုများအပေါ် မူတည်ပါသည်။ ကလေးငယ် များသည် အသံထွက်နှင့် ငိုခြင်းဖြင့် ဆက်သွယ်ကြသည်။ ၎င်းတို့၏ အာရုံစိုက်မှု တောင်းဆိုချက်များကို တုံ့ပြန်ခြင်းသည် သင့်ကလေးနှင့် သင်ကြားက သံယောဇဉ်ကို အားပေးကာ ၎င်းတို့အား ကျန်းမာသော အရွယ် ရောက်ပြီးသူ ဆက်ဆံရေးအတွက် ထူထောင်ပေးသည်။ သင့်ကလေးကို နိုးနေပြီး သင်သူတို့နှင့်အတူ ရှိနေစဉ် တွင် သင့်ကလေးကို ၎င်းတို့၏ဝမ်းဗိုက်ပေါ်တွင် ထားရန် အန္တရာယ်ကင်းပါသည်။ ယင်းက ၎င်းတို့၏ လည်ပင်းကို သန်မာစေပြီး ၎င်းတို့၏ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးမှုကို အထောက်အကူပြုသည့် ၎င်းတို့၏ လက်များနှင့် ၎င်းတို့၏ ခြေထောက်များကို ကန်ကျောက်ရန် အားပေးသည်။ ဒါပေမယ့် အမြဲတမ်း ကျောပေါ်မှာ အိပ်သင့်တယ်။
၃ မှ ၉ လ
အခုအချိန်မှာတော့ သင့်ကလေးက သူတို့ကို ဂရုစိုက်ပြီး မေတ္တာအပေးဆုံးသူဆီက အသိအမှတ်ပြုပြီး သင်ယူနေပါတယ်။ လှန်လှောရန်၊ ထိုင်နေရာသို့ ရွှေ့ရန်နှင့် သန်မာလာသည်နှင့်အမျှ ၎င်းတို့၏ ခန္ဓာကိုယ်ကို မတ်တပ်ရပ်သည့် အနေအထားသို့ မည်သို့ဆွဲယူရမည်ကို သင်ယူကြမည်ဖြစ်သည်။6လကြာသောအခါ သင့်ကလေးသည် ခိုင်မာသော အစားအစာများကို စတင်စားသောက်လာမည်ဖြစ်ကာ ဤအချိန်သည် ကောင်းမွန်သော စားသောက်မှုအလေ့အထကို ထူထောင်ရန် အချိန်ဖြစ်သည်။ သင့်ကလေးရရှိသည့် အာဟာရသည် ၎င်းတို့အား ကောင်းမွန်သောကျန်းမာသောဘဝကို ပိုင်ဆိုင်စေမည်ဖြစ်သည်။ သင့်ကလေးက အသံပိုထွက်လာပြီး သူတို့လက်ထဲမှာကိုင်ထားနိုင်တဲ့ အရာတွေကို စိတ်ဝင်စားလာပါလိမ့်မယ်။ ကလေးငယ် များသည် လွယ်ကူစွာ ပြုံးနိုင်ပြီး ပျော်ရွှင်နေသော အခြားသူများ၏ အနီးအနားတွင် ရှိနေခြင်းကို နှစ်သက်ကြ သည်။ သူတို့သည် မှန်ထဲသို့ကြည့်ကာ ဝှက်ထားသော အရာဝတ္ထုများကို ရှာဖွေရန် peek-a-boo ဂိမ်းများကို နှစ်သက်ကြသည်။
၁ နှစ်မှ ၂ နှစ်
သင့်ကလေးငယ်နှင့် သီချင်းဆိုခြင်းနှင့် စကားပြောခြင်းသည် စကားပြောတတ်ရန် သင်ယူစေပြီး အခြားသူ များနှင့် မျှဝေနည်းကို စတင်လေ့လာရန် ကူညီပေးပါလိမ့်မည်။ ကလေးများအတွက် အတွင်းပိုင်းဂိမ်းများတွင် သီချင်းဆိုခြင်း၊ တီးမှုတ်ခြင်းနှင့် အကခြင်းတို့ပါဝင်သည်။ အပြင်သို့ လမ်းလျှောက်ခြင်းနှင့် ဥယျာဉ်၌ 'အလုပ် လုပ်ခြင်း' တို့သည်လည်း ပျော်စရာကောင်းသော သင်ယူမှု လှုပ်ရှားမှုများဖြစ်သည်။ စာအုပ်ဖတ်ခြင်း၊ ရုပ်ပုံများ ကို ကြည့်ခြင်း နှင့် ဝတ်စားဆင်ယင်မှု ဆော့ကစားခြင်း အားလုံးသည် ၎င်းတို့၏ စာဖတ်ခြင်းနှင့် ပုံပြင်ပြောခြင်း စွမ်းရည်ကို တိုးတက်စေမည်ဖြစ်သည်။ အရွယ်အစားနှင့် ပုံသဏ္ဍာန်ရှိသော ကတ်ထူသေတ္တာများကို အရုပ်များနှင့် ဘေဘီအိမ်များအဖြစ် ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ကလေးငယ်များသည် ၎င်းတို့၏ ပြုစုစောင့်ရှောက် ပေးသူကို အိမ်တွင်းဝေယျာဝစ္စများ ဆောင်ရွက်ပေးပြီး အားပေးမှုနှင့် ချီးကျူးမှုများကို တုံ့ပြန်ရန်လည်း စိတ်အား ထက်သန်လာမည်ဖြစ်သည်။ ကလေးငယ်အများစုသည် ဂိမ်းဆော့ခြင်းကို နှစ်သက်သော်လည်း သင့်ကလေးသည် လမ်းများ၊ မီး သို့မဟုတ် ရေများအနီးတွင် အန္တရာယ်မကျရောက်စေရန် ဂရုစိုက်ပါ။
၃ နှစ်မှ ၄ နှစ်
ဒီအသက်အရွယ်မှာ သင့်ကလေး သင်ယူဖို့ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းက သင်နဲ့ အချိန်ဖြုန်းတာ၊ ပုံပြင်တွေ ပြောပြတာ၊ သူတို့ကိုယ်သူတို့ ဘယ်လို ဂရုစိုက်ရမလဲဆိုတာ သင်ပေးခြင်းအားဖြင့် သူတို့ကိုယ်သူတို့ အဝတ်အစားဝတ်ပြီး အစားအသောက်ပြင်ဆင်ပေးတာမျိုးပါ။ ၎င်းတို့သည် ခံစားချက်များအကြောင်းကို သင်ယူနေကြပြီး ၎င်းတို့သည် ဒေါသထွက်နေချိန် သို့မဟုတ် စိတ်ဆိုးနေချိန်တွင် ခွဲခြားသိမြင်နိုင်စေရန် သင်ယူနေချိန် သို့မဟုတ် မှားယွင်းသောအမူအကျင့်နှင့် မိမိကိုယ်ကို ထိန်းချုပ်နည်းတို့ကို သင်ယူနေချိန် ဖြစ်သည်။ အိမ်လုပ်တူရိယာများပြုလုပ်ခြင်း၊ ပန်းချီဆွဲခြင်း၊ အစားအသောက်ရောနှောခြင်းနှင့် တွဲလုပ်ခြင်း စသည့် လှုပ်ရှားမှုများကို နှစ်သက်ကြသည်။ ၎င်းတို့သည် ပြဿနာများကို မည်သို့ဖြေရှင်းရမည်ကို သင်ယူနေပြီး အခြားသူများ နာကျင်သည့်အခါ သို့မဟုတ် ဝမ်းနည်းသည့်အခါ အသိအမှတ်ပြုရန်လည်း သင်ယူနေပါသည်။
ဤအရွယ်ကလေးများသည် ကောင်းမွန်စွာပြုမူနေထိုင်ပြီး အိမ်ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ကူညီပေးသောအခါတွင် ၎င်းတို့အား ချစ်မြတ်နိုးပြီး ချီးကျူးခံရကြောင်း သိထားရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဇာတ်လိုက်ဂိမ်းများကို နှစ်သက် ကြပြီး ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်ဇာတ်လမ်းများကို ဖန်တီးကြသည်။ ၎င်းတို့သည် ရုပ်ဖျက်ခြင်းနှင့် မျက်နှာဖုံးများကို နှစ်သက်ကြပြီး ၎င်းတို့မြင်ခဲ့ရသည့် သို့မဟုတ် ဖတ်ထားသည့်အရာများမှ ၎င်းတို့၏ စိတ်ကြိုက် ဇာတ်ကောင် များအဖြစ် ဟန်ဆောင်နိုင်သည်။ ဒီအရွယ်မှာ သူတို့နှစ်သက်တဲ့ ပြင်ပဂိမ်းတွေထဲမှာ ပန်းခြံထဲမှာ ကစားတာ၊ သဘာဝပတ် ဝန်းကျင်နဲ့ မြေပြင်ဇာတ်လမ်းတွေအကြောင်း လေ့လာတာတွေ ပါဝင်ပါတယ်။
Stress Management အတွက် အကြံပြုချက်7ခု
၁။ သင့်စိတ်ဖိစီးမှုကို နားလည်ပါ။
မင်း ဘယ်လို စိတ်ဖိစီးနေလဲ။ လူတိုင်းအတွက် ကွဲပြားနိုင်ပါတယ်။ သင့်အတွက် စိတ်ဖိစီးမှုပုံစံကို နားလည်ခြင်းဖြင့် သင်သည် ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ ပြင်ဆင်နိုင်ပြီး လိုအပ်သည့်အခါတွင် သင့်စိတ်ဖိစီးမှု စီမံခန့်ခွဲရေး ကိရိယာပုံးကို သင်ရောက်ရှိနိုင်ပါသည်။
၂။ သင်၏ စိတ်ဖိစီးမှုအရင်းအမြစ်များကို ခွဲခြား သတ်မှတ်ပါ။
ဘယ်အရာက သင့်ကို စိတ်ဖိစီးစေတာလဲ။ အလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မိသားစုပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အပြောင်းအလဲပဲဖြစ်ဖြစ်၊ တခြားဖြစ်နိုင်ချေရှိတဲ့ ထောင်ချီတဲ့ အစပျိုးမှုပဲဖြစ်ဖြစ်။
၃။ စိတ်ဖိစီးမှုအချက်ပြမှုများကို အသိအမှတ်ပြုရန် လေ့လာပါ။
ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည် စိတ်ဖိစီးမှုကို ကွဲပြားစွာလုပ်ဆောင်ကြသောကြောင့် သင်၏ တစ်ဦးချင်းစီ၏ စိတ်ဖိစီးမှု လက္ခဏာများကို သတိထားရန် အရေးကြီးပါသည်။
သင့်အတွင်းပိုင်း အချက်ပေး ခေါင်းလောင်းများက ဘာလဲ။
သည်းခံနိုင်မှုနည်းခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ဗိုက်နာခြင်း သို့မဟုတ် အထက်ဖော်ပြပါ ‘စိတ်ဖိစီးမှု လက္ခဏာများ’ မှ ပေါင်းစပ်ထားခြင်း၊
၄။ သင်၏ စိတ်ဖိစီးမှုနည်းဗျူဟာများကို အသိအမှတ်ပြုပါ။
စိတ်တည်ငြိမ်အောင် လုပ်နည်းက ဘာလဲ။ ဒါတွေဟာ နှစ်တွေကြာလာတာနဲ့အမျှ သင်ယူခဲ့တဲ့ အမူအကျင့်တွေ ဖြစ်နိုင်သလို တစ်ခါတစ်ရံမှာ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ ရွေးချယ်မှုတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အချို့သောလူများသည် အရက်ကို ကိုယ်တိုင်ဆေးသောက်ခြင်းဖြင့် သို့မဟုတ် အလွန်အကျွံစားခြင်းဖြင့် စိတ်ဖိစီးမှုကို ရင်ဆိုင်ကြသည်။
၅။ ကျန်းမာသော စိတ်ဖိစီးမှု စီမံခန့်ခွဲမှုဗျူဟာများကို အကောင်အထည်ဖော်ပါ။
လက်ရှိ ကျန်းမာရေးနဲ့ မညီညွတ်တဲ့ ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းတဲ့ အပြုအမူတွေကို သတိထားဖို့ ကောင်းပါတယ်။ ဒါကြောင့် သူတို့ကို ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ ရွေးချယ်မှုတစ်ခုအတွက် ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်လက်ရှိသွားနေတဲ့ အစားအလွန်အကျွံစားရင်၊ အဲဒီအစား တရားထိုင်တာ၊ ဒါမှမဟုတ် သင့်အခြေအနေကို စကားပြောဖို့ သူငယ်ချင်းကို ဖုန်းခေါ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ American Psychological Association က တစ်ကြိမ်လျှင် အမူအကျင့်တစ်ခုကို ပြောင်းလဲခြင်းသည် အပြုသဘောဆောင်သော ပြောင်းလဲမှုကို ဖန်တီးရာတွင် အထိရောက်ဆုံးဖြစ်ကြောင်း အကြံပြုထားသည်။
၆။ မိမိကိုယ်ကို ဂရုစိုက်မှုကို ဦးစားပေးပါ။
ကျွန်ုပ်တို့သည် မိမိကိုယ်ကို အချိန်ပေးသောအခါ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ သုခချမ်းသာကို အခြားသူများရှေ့တွင် ထားရှိသည်။ ၎င်းသည် စတင်ရန် တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်သည်ဟု ခံစားရနိုင်သော်လည်း ၎င်းသည် လေယာဉ်ပျံပုံ ဥပမာကဲ့သို့ပင်ဖြစ်သည်—အခြားသူများကို မကူညီမီ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်ပိုင်အောက်ဆီဂျင် မျက်နှာဖုံးကို တပ်ဆင်ထားရမည်ဖြစ်သည်။ လုံလောက်တဲ့ အိပ်ချိန်၊ အစားအသောက်၊ အားလပ်ချိန်နဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းတွေလိုမျိုး ကျန်းမာရေးကို မြှင့်တင်ပေးတဲ့ အရိုးရှင်းဆုံးအရာတွေကို မကြာခဏ သတိမမူမိကြပါဘူး။ Self-care သည် group-care ဖြစ်သည်။
၇။ လိုအပ်သည့်အခါ အကူအညီတောင်းပါ။
သင်စိတ်ရှုပ်နေပါက သင်ပြောဆိုနိုင်သော သူငယ်ချင်း သို့မဟုတ် မိသားစုဝင်တစ်ဦးထံ ဆက်သွယ်ပါ။ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ပညာရှင်တစ်ဦးနှင့် စကားပြောခြင်းသည်လည်း စိတ်ဖိစီးမှုကို လျှော့ချနိုင်ပြီး ပိုမိုကျန်းမာသော ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနည်းဗျူဟာများကို လေ့လာရန် ကူညီပေးပါသည်။
၁။ ဘဝဆိုတာ လှပတဲ့အရာဖြစ်ပြီး ပြုံးစရာတွေအများကြီးရှိလို့ ပြုံးထားပါ။
on January 14, 2022 No comments:
ကျန်းမာရေးအတွက် ထိပ်တန်းအစားအစာ ၁၀ မျိုး
တစ်နေ့ကို ရေ ၈ ခွက်မှ ၁၂ ခွက်အထိ သောက်ပါ။
၂။ အစိမ်းရင့်ရောင် ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ
အစိမ်းရင့်ရောင် ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကို တစ်ပတ်လျှင် အနည်းဆုံး သုံးကြိမ်မှ လေးကြိမ် စားပါ။ ရွေးချယ်ခွင့် ကောင်းများတွင် ဘရိုကိုလီ၊ ငရုတ်ကောင်း၊ ဘရပ်ဆဲလ်ပင်ပေါက်များနှင့် ကိုက်လန်နှင့် ဟင်းနုနွယ်ရွက်ကဲ့သို့ အစိမ်းရောင်အရွက်များ ပါဝင်သည်။
Labels: ကျန်းမာရေး, ဗဟုသုတ
မသေချာ မရေရာမှုကို ရင်ဆိုင်ရန် နည်းလမ်းခုနစ်သွယ်
ကျွန်မတို့သည် ယနေ့ အခြေအနေတွင် မသေချာမရေရာမှုတွေနဲ့ နေထိုင်ရတာ ခက်ခဲပင်ပန်းလှပါသည်။ လူသားများသည် အစာ၊ လိင်နှင့် အခြားသော အဓိကဆုလာဘ်များကို လိုချင်သကဲ့သို့ ကျွန်မတို့သည် အနာဂတ်နှင့်ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်ကို တောင့်တကြသည်။ ကျွန်မတို့၏ဦးနှောက်များသည် မသေချာ မရေရာမှုများကို ခြိမ်းခြောက်မှုတစ်ခုအဖြစ် ရှုမြင်ကြပြီး ၎င်းတို့သည် ကျွန်မတို့၏သေချာမှုကို ဖန်တီးခြင်းမှ လွဲ၍ အခြားမည်သည့်အရာကိုမဆို အာရုံစိုက်နိုင်စွမ်းကို လျော့နည်းစေခြင်းဖြင့် ကာကွယ်ရန် ကြိုးစားကြ သည်။ ဥပမာအားဖြင့် အလုပ် မသေချာ မရေရာမှုသည် ကျွန်မတို့၏ကျန်းမာရေးကို အမှန်တကယ် ဆုံးရှုံးခြင်းထက် ကျွန်ုပ်တို့၏ကျန်းမာရေးကို ပိုမိုထိခိုက်စေကြောင်း သုတေသနများက ဖော်ပြသည်။ အလားတူပင်၊ ၎င်းတို့တွင် အခြားသော စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ နာကျင်မှုများသည် တစ်နေ့ထက် တစ်နေ့ ပိုမိုတိုးပွားလျှက် ရှိနေပေသည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ အနာဂတ်ကွက်လပ်များကို ဖြည့်ရန် မြှုပ်နှံထားသည့် စက်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးရှိသည်မှာ အံ့သြစရာမဟုတ်ပေ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ နက္ခတ်ဗေဒင်အပလီကေးရှင်းများ၏ လူကြိုက်များမှု၊ သို့မဟုတ် မဟာဗျူဟာရေးဆွဲခြင်းအတွက် ရည်ညွှန်းသည့် စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ အတိုင်ပင်ခံများကို ကြည့်ပါ။ အခြေခံဝါဒီ ဘာသာတရားများသည် ကျွန်မတို့အား မရှင်းလင်းသော စည်းမျဉ်းများနှင့် ပကတိအမှန်တရားများကို ပေးဆောင်ခြင်းဖြင့် စိုးရိမ်ပူပန်မှုကို တန်ပြန်ပါသည်။ ပူးပေါင်းကြံစည်မှု သီအိုရီများသည် ရှုပ်ထွေးသောဖြစ်ရပ်များအတွက် ရိုးရှင်းသောရှင်းလင်းချက်ပေးပါသည်။ သို့သော် တစ်ခါတစ်ရံ—အမြဲတမ်း—သေချာမှုကို ဖန်တီးရန် မကြိုးစားခြင်းသည် ပို၍ထိရောက်သည်။ ဆင့်ကဲ ဖြစ်စဉ်များသည် မသေချာမရေရာမှုများကို တွန်းလှန်ရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦးနှောက်ကို ခွန်အားဖြစ်စေနိုင် သော်လည်း အနာဂတ်တွင် မည်သည့်အရာဖြစ်လာမည်ကို ကျွန်ုပ်တို့ အမှန်တကယ် မသိနိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်များကို အကြီးအကျယ် အနှောင့်အယှက်ပေးကာ ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးအစီအစဉ်များကို ရှင်းရှင်းဖျက်ဆီးခဲ့သည့် ကပ်ရောဂါကဲ့သို့ မဖြစ်နိုင်သော အခြေအနေများတွင်၊ ကျွန်မတို့သည် မရှင်းလင်းသောစိတ်ဖြင့် နေထိုင်ရန် သင်ယူရန် အလွန်လိုအပ်ပါသည်။ “မသေချာမှုသည် တစ်ခုတည်းသော သေချာမှုဖြစ်သည်” ဟု သင်္ချာပညာရှင် John Allen Paulos က ရေးသားခဲ့သည်။ "မလုံခြုံမှုနဲ့ ဘယ်လိုနေထိုင်ရမယ်ဆိုတာ သိတာက တစ်ခုတည်းသော လုံခြုံရေးပါ။" ဒီတော့ အရာအားလုံးကို ထိန်းမနိုင်သိမ်းမရဖြစ်တဲ့အခါ ဘယ်လို အကောင်းဆုံး ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်မလဲ။ ဤသည်မှာ အံ့အားသင့်စရာ ဗျူဟာ ခုနစ်ခုကို ဆက်လက် တင်ပြပါမည်။
Labels: Motivation, Tips, ဗဟုသုတ
မသေချာမရေရာသော အချိန်များတွင် မည်သို့ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရမည့် နည်းလမ်းများ
1 နေ့စဥ် ငြိမ်သက်ရန် အချိန်ပေးပါ။
ယင်းက သင့်အတွင်းစိတ်ပညာမှ အမှန်တရားနှင့် လမ်းညွှန်ချက်ကို နားထောင်နိုင်စေမည်ဖြစ်သည်။ အကြောက်တရားက သင့်အတွေးတွေကို တွန်းပို့နေချိန်မှာ မသေချာမရေရာတဲ့ အချိန်တွေမှာ သင့်ကိုယ်သင် ပြန်လည်ချိတ်ဆက်ပြီး ခိုင်ခံ့စေပါလိမ့်မယ်။ သင်မည်သူဖြစ်သည်ကို ပြန်လည်ရှာဖွေတွေ့ရှိရန် အခွင့်အရေးတစ်ခုအနေဖြင့် ဤအချိန်ကို ကြည့်ရှုရန် ရွေးချယ်နိုင်ပြီး tern တွင် သင့်အား လမ်းပြရန် ခွန်အားနှင့် ဉာဏ်ပညာကို ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။
ငါ့အတွက်၊ တရားထိုင်ခြင်းနဲ့ ယောဂကျင့်ခြင်းက ငါ့ကို ခိုင်ခံ့မြဲမြံစေကြောင်း သက်သေပြခဲ့ပြီး၊ အဲဒါတွေက ငါ့ကို စိတ်အပန်းပြေစေတဲ့အပြင် ငါ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဖြစ်ပျက်နေသမျှကို ငါရှိနေစေတယ်။
2 ရောင်ပြန်ဟပ်ခြင်း – အရင်ကဘဝ ဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့သလဲ နဲ့ ဘဝက ဘယ်လိုရှေ့ဆက်သွားမလဲ။
အကျပ်အတည်းမကြုံခင်မှာ မင်းဘဝ ဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့လဲ ဆိုတာ ကြည့်ပါ။ တကယ်တော့၊ မင်းဘဝဟာ မုန်တိုင်းတွေ ကြုံလာတဲ့အခါ တူညီမှာမဟုတ်ဘူး။ မကြာသေးမီက "ပုံမှန်ပြန်မဖြစ်ခင်၊ ပုံမှန်ပြန်သွားရမယ့်အပိုင်းကို ပြန်စဉ်းစားပါ"
3 သင်ထိန်းချုပ်နိုင်သည့်အရာများကို အာရုံစိုက်ပါ။
မသေချာမရေရာမှုတွေနဲ့ ကြုံလာရတဲ့အခါ ရလဒ်က ဘယ်လို ထွက်မလဲဆိုတာကို သင် မထိန်းချုပ်နိုင်ဘဲ ကြောက်ရွံ့မှု၊ စိုးရိမ်ပူပန်မှု ဒါမှမဟုတ် စိတ်ဓာတ်ကျမှုတွေနဲ့ ကျန်ရစ်ခဲ့မှာပါ။ သင်ထိန်းချုပ်နိုင်သည့်အရာများကို အာရုံစိုက်ပါ၊ နေ့စဥ်အိပ်ယာထပါ၊ သင့်အတွက် လက်တွေ့ကျသောလုပ်စရာစာရင်းတစ်ခုသတ်မှတ်ပါ၊ သင့်စာရင်းမှအရာများကိုစစ်ဆေးခြင်းဖြင့် သင်သည် ကုန်ထုတ်စွမ်းအားနှင့် ပြီးမြောက်အောင်မြင်မှုကို ခံစားရမည်ဖြစ်သည်။
သင့်တစ်နေ့တာ ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ သင့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဖြစ်ပျက်နေလဲဆိုတာကို သင် ဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲဆိုတာကို သင်ထိန်းချုပ်နိုင်မှာပါ။ ဤနယ်ပယ်များကို သင်မည်ကဲ့သို့ ထိန်းချုပ်နိုင်ပုံကို အာရုံစိုက်ခြင်းက သင့်အား ခွန်အား ကို ပေးစွမ်းနိုင်ပြီး သင့်တွင် ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းမရှိသောအရာကို လျော့နည်းအာရုံစိုက်ရန် ကူညီပေးပါမည်။
4 လိုအပ်ပါက လူမှုရေးအရချိတ်ဆက်ပြီး ကျွမ်းကျင်သောပံ့ပိုးကူညီမှုများကို ရှာဖွေပါ။
Labels: Motivation, Tips, ဗဟုသုတ, အတွေးအမြင်, ေဆာင္းပါး
လူရယ်လို့ ဖြစ်လာတာနဲ့အမျှ လူမှုဝန်းကျင်တွင် အများနှင့် ဆက်သွယ်ကျင်လည်ရမည်မှာ အမှန်ပင် ဖြစ်ပါတယ်။ လူအများနဲ့ စကားပြောဆိုရာတွင် လူအများနှစ်သက်သည့် စကား၊ နားဝင်ချိုသော စကားအများ လက်ခံ နိုင်သော စကားနှင့် လက်မခံနိုင်သော စကားများလည်း ရှိတတ်ကြပါတယ်။ ယခုတင်ပြချင် တာကတော့ လူမှုပရိသတ်အလယ်မှာ ရဲရဲဝံ့ဝံ့နဲ့ အောင်မြင်စွာ ရပ်တည်နိုင်ဖို့ မိမိပြောချင်သော စကားများကို လူများစိတ်ဝင်စားဖို့နဲ့ ဂရုတစိုက်နားထောင်စေရန် အတွက် တွေ့ကြုံရသမျှ ပြောပြရခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။
Labels: Motivation, ဗဟုသုတ, ေဆာင္းပါး
ယနေ့ ကမ္ဘာကြီးက လျင်မြန်သွက်လက်သောနှုန်းနဲ့ ပြောင်းလဲနေပါတယ်။ ဒီအထဲမှာ နည်းပညာနယ်ပယ်က ပိုပြီး လွန်စွာမှပင် အပြောင်းအလဲမြန်ဆန်လွန်းလှပါတယ်။ တိုးတက်မှုကလည်း မြင့်မားလာနေပါတယ်။ ကွန်ပျူတာဆိုတာကလည်း နည်းပညာ တိုးတက်မြင့်မားလာမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာတာပါ။ ယနေ့ လူတိုင်း နီးပါးက ကွန်ပျူတာကို အသုံးပြုနေပါပြီ။ ဒီတော့ ကျွန်မတို့ရဲ့ နေ့စဉ် နေထိုင်မှုစနစ်တွေကလည်း ပြောင်းလဲ လာခဲ့ပါတယ်။ ကွန်ပျူတာယဉ်ကျေးမှုလို့ ခေါ်နိုင်တဲ့စနစ်တစ်ခုအဖြစ် ခိုင်ခိုင်မာမာရပ်တည်နေခဲ့ပါပြီ။ ယခုဆိုရင်လည်း ကွန်ပျူတာအရောင်းပွဲတွေကို ကြိုကြားကြိုကြား စျေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ လူတိုင်း အသုံးပြုနိုင် သော ခေတ်ကို ရောက်ရှိလာခဲ့ပါပြီ။
Labels: Technology, ေဆာင္းပါး
အသိအမှတ်ပြုခြင်း၊ သဘောတူညီရရှိပြီ အထိမ်းအမှတ်၊ အတူနေဖို့၊ ရိုးသားမှုနဲ့ ကျေးဇူးရှိမှုတို့အတွက် ဖြစ်ပါသည်။ လိမ္မော်ရောင်နှင်းဆီ၏ အဓိပ္ပါယ်မှာ စိတ်အားထက်သန်မှုနှင့် စွမ်းအင်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ၎င်းတို့သည် ရာထူးတိုးခြင်းနှင့် အလုပ်သစ်အတွက်ပေးပို့ရန် ပြီးပြည့်စုံသော ပန်းပွင့်များဖြစ်သည်။ လိမ္မော်ရောင် နှင်းဆီကို ကြည့်ရုံနဲ့တင် မင်းကို အရမ်းပျော်စေတဲ့အခါ ချီးမွမ်းမှုနဲ့ စိတ်အားထက်သန်မှုကို ဖော်ပြဖို့ အသုံးပြုတာ အံ့သြစရာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့၏တောက်ပသော အရောင်အသွေးနှင့် ဆွဲဆောင်မှု ရှိသော ပုံစံသည် မည်သည့်အခန်းကိုမဆို ပေါ့ပါးစေပြီး စွမ်းအင်အနည်းငယ်ဖြင့် ကမ္ဘာသို့သွားရန် ကျွန်မတို့ အားလုံးကို သတိပေးသည်။ ၎င်းတို့သည် အသစ်အဆန်းတစ်ခုကို စတင်နေသူတစ်ဦးအတွက် သို့မဟုတ် အနည်းငယ် မြှင့်တင်လိုသူအတွက် ကြီးမားသော စိတ်ဓာတ်ခွန်အားဖြစ်စေသော ပန်းတစ်ပွင့်ဖြစ်သည်။
on December 20, 2021 No comments:
အမည်ရင်းမှာ ယမင်းအေး ဖြစ်ပြီး B.Sc (Zool) Q (Credit) နဲ့ ၂၀၀၂ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှ ဘွဲ့ရရှိခဲ့၊ Post Graduate Diploma in Computer Application ကွန်ပျူတာဘွဲ့ကို ၂၀၁၀ ခုနှစ်နှင့် Research and Development, Diploma in Business Management ဘာသာရပ်များကို ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် အောင်မြင်ခဲ့၊ စာပေကို ငယ်ငယ်တည်းက ဝါသနာပါပြီး ၂၀၀၆ ခုနှစ်မှ စတင်ကာ ကိုယ်ပိုင်ဘလော့ဂ်ပေါ်တွင် သုတ၊ ရသ၊ သတင်း၊ ဆောင်းပါး၊ ကဗျာများ စတင်ကာ ရေးသားခဲ့ပြီး စာပေကို မြတ်နိုးသူ တစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွင်သို့ ၁၉၉၈ ခုနှစ်မှ စတင် ၀င်ရောက်ခဲ့ပြီး တစ်ဖက်မှ ဝါသနာပါရာ စာပေများ ရေးသားလျက် ရှိပါသည်။ ယခုလက်ရှိတွင် လုပ်ငန်းခွင် တစ်ခု တွင် Communication Executive အဖြစ် တာ၀န်ထမ်းဆောင်ရင်း ဝါသနာပါရာ စာပေများ ဆက်လက်ရေးသားလျက် ရှိပြီး စာရေးဆရာမကောင်း တစ်ဦးဖြစ်ရန် ရည်သန်လျက် ရှိပါသည်။ ဘဝက ဘာမှမဟုတ်ပေမယ့် တပ်မက်လွန်းတဲ့ ဘဝကို ရင်ခုန်ရူးသွပ်ရင်း ပျော်မွေ့နေတဲ့ စာပေနယ်ကြီး အမြဲတည်တံ့စေဖို့ ဆုတောင်းနေမိပါတကား....
ပုဂံ ၁၀ ရာစုႏွစ္ ရုပ္ပြါးေတာ္ အမ်ိဳးအစား - ရုပ္ပြါးေတာ္ အခ်ိန္ကာလ - ၁၀ ရာစုႏွစ္ ေတြ႕ရွိရာေနရာ - ပုဂံ ၊ ျမန္မာ ျပဳလုပ္ပံုနည္းပညာ - ေက်ာ...
မသေချာမရေရာသောအချိန်များတွင် ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းပါ။ 1 နေ့စဥ် ငြိမ်သက်ရန် အချိန်ပေးပါ။ ယင်းက သင့်အတွင်းစိတ်ပညာမှ အမှန်တရားနှင့် လမ်းညွှန်ချက်...
၁။ လိမ္မော်ဝါနှင်းဆီပန်း လိမ္မော်ဝါနှင်းဆီပန်းဖြစ်ပါတယ်။ အသိအမှတ်ပြုခြင်း၊ သဘောတူညီရရှိပြီ အထိမ်းအမှတ်၊ အတူနေဖို့၊ ရိုးသားမှုနဲ့ ကျေးဇူး...